दादको लागि अचुक औषधी सयपत्रीको फुल! ७ दिनमा नै गाएब गर्नुहोस् – Sandesh munch
दादको लागि अचुक औषधी सयपत्रीको फुल! ७ दिनमा नै गाएब गर्नुहोस्
प्रकाशित मिति: बुधबार, चैत्र १८, २०७७ समय: २०:२६:५२
सयपत्री एउटा फूलको प्रजाति हो। यो फूल नेपालको प्रसिद्ध फूल हो। सयपत्री फूलको प्रयोग १७ औं शताब्दीदेखि मात्र भएको मानिन्छ। नेपालमा तिहारका बेला विशेष रूपमा प्रयोग हुने सयपत्री फुलका अनेकौ फाइदा छन् जसमा यो पनि एक हो।
दाद एक चरम् रोग हो जो कष्टकर हुन्छ। प्रतिदिन सयपत्री फुलको ताजा रस निकालेर दाद भएको ठाँउमा लगाउनाले तपाइको दाद लै निकै फाइदा गर्छ।
यो प्रकृया दिनमा २-३ पटक गर्दा झनै राम्रो हुन्छ। यसरी दैनिक सयपत्रीको रस दादमा लगातार ७ दिनसम्म लगाउनाले तपाईको दाद आँफै हराएर जानेछ।
यसलाई बनाउनको लागी सामानहरु तपाईहरुको घरमा नै मिल्छ ।
तपाईले दुई वा तीन चम्चा चियापत्ती लिनुहोस् र एक कपमा चामल लिनुहोस् । अब एक भाँडामा चार कचौरा पानी हाल्नुहोस् र यसलाई ग्यासमा राख्नुहोस् र यसमा चियापत्ती र चामल राख्नुहोस् र यसलाईउमाल्नुहोस्। अब यसलाई ग्याँसबाट निकालनुहोस् र यसलाई चियाछान्नीले छान्नुहोस् ।